Bigudi- "boomerangs" - magic Wand magic
izinwele amahle mihlobiso babekhona futhi ihlala esiqongweni ukuthandwa. Kuyinto enhle. Lokhu enhle. Kuyinto imfashini. Labo curls ngokwemvelo, lucky kakhulu. Nakuba singenakusho ngokuqiniseka lapha. Izinwele kungase kukuhlupha, phela isifiso sabesifazane ukushintsha isitayela izinwele, kodwa ngesikhathi esifanayo ezikhangayo, ayizange kukhanselwe. Ngaphakathi a khundla ngcono kukhona abanikazi izinwele iqonde: wafuna - ukuya nge kubekwa evamile, kubalulekile ukuba beveza izinto ezintsha ukunqoba - aid uyolokhu curls.
Indlela ephephile futhi elula ukuthola curls amancane noma amagagasi ezithambile egeleza izinwele - emazombezombe kubo phezu ngefaskamu. Namuhla, le mikhiqizo ethulwa lwemibono leyehlukene, ngakho inqubo ukuguqulwa izinwele zakho, ngeke kube nzima. Ziyakwazi:
termobigudi (nje indlela esheshayo ukuze uthole curls, kodwa akufanele uphathwe kabi ngoba desiccate izinwele ngibenze aphuke kalula);
elektrobigudi (sihluke ngowokuqala uhlobo Ukushisa izindlela);
velvet ezinamasondo (embozwe velor, zinemigodi obandayo, okuyothi ngalo izinti plastic);
Velcro (exhunywe izinwele esebenzisa izingwegwe ekhethekile, injongo yabo eyinhloko - akukho izingidi, futhi unikeza ubukhazikhazi kanye izinwele ivolumu, ayifanele ezinde yonakele);
Foam ezinamasondo (ukuzisebenzisa kangcono ekuseni, njengoba zithambile kakhulu futhi awukwazi ukulala nabo, futhi akufanele isetshenziswe for izinwele iDemo nasebubini);
"Boomerangs" (uhlobo kuphela izinto zokulungisa izinwele emakhanda, okuyinto efanelekayo ingalali);
ezinamasondo Plastic (ukubukeka okunesithunzi namaqhosha kanye cap for nenkanuko edlulele; ngibashiye ebusuku kubonakala kuphatheke kabuhlungu kakhulu, ngaphandle-ke kuyadingeka ukuba uqinisekise ukuthi izinwele engakutholi udidekile);
bobbins (ukunikeza umphumela a Perm, nethonya ezuzisayo on izinwele futhi bome ngokushesha);
ngefaskamu (asidingi yasibamba, njengoba kunjalo induku ngocingo, zingabantu kalula kakhulu kungenziwa baphotha kunoma yiluphi uhlobo).
Phakathi kwakho konke lokhu ubukhazikhazi bigudi- "boomerangs" zihlukaniswa usizo lwabo. Ziyakwazi Foam obukhulu kusukela tube ngaphakathi okuyinto induku. Curler obuphelele incike ububanzi imicu futhi, ngokufanelekile, ububanzi we zinyakaze.
Phakathi izinzuzo zabo eziyinhloko okulandelayo:
"Boomerangs" Bigudi- kahle igcinwe izinwele anoma yibuphi ubude kanye kwabantu.
Kulula kakhulu ukusebenzisa: zingabantu esanele phinda futhi yokuvala.
Ngenxa isakhiwo abo athambile embhedeni wabo kanokusho.
"Boomerangs" Bigudi- ungawoni isakhiwo izinwele.
enamathiselwe kahle izinwele, hhayi sehla off kubo.
Bonke abantu abake wasebenzisa ngefaskamu izinwele, boomerangs, ukubuyekezwa ushiye omuhle kuphela. Intambo ovamile e lawa mazwi ezintathu: elula, ephephile, elula. Futhi lokhu kuyiqiniso, kubalulekile kuphela hhayi ukukhohlwa mayelana nemithetho eyisisekelo ukusiza sifinyelele nomphumela Chic.
Okokuqala, bakhohlise bigudi- "boomerangs" akudingekile ukumanzisa futhi izinwele emanzi. Too ezimanzi ayikwazi zome kuze kube sekupheleni, futhi uzothola akukho izingidi, futhi icicles.
imikhiqizo isitayela Okwesibili, akufanele kabi, ungathola umphumela izinwele ethe njo.
Okwesithathu, kudingeka uthathe zingu ububanzi efanayo, kungaleyo ndlela kuphela uthola umbhalo wekugcina lolungiswe emaphutsa, izingidi ezifanayo.
Okwesine, nge ezincane ubukhulu curler etholwe curls amancane. Nokho, ubude izinwele ngesikhathi esifanayo kungaba zibukeke kuyehla ngesigamu.
Ukusebenzisa bigudi- "Boomerang", intengo zazo, ngasendleleni, ezingaphezu kuka iyatholakala, ungakwazi ukushintsha kwekhanda okungenani nsuku zonke. Lokhu kusho ukuthi uzobe ezikhangayo futhi akuqinisekile njalo.
A imoto kuhle nezinwele: nokubuyekeza amakhasimende. 10 we amashampu kangcono nezinwele
Yiziphi zezinwele ngenxa yokufakaza lomshado?
Izikhangibavakashi Belgium. Amadolobha eBelgium
Izindlu zangasese «Cersanit». izinga Polish nokwethembeka
Hockey umdlali Ovechkin Aleksandr: Biography, izithombe
Apple cider ekhaya: ulungiselela iwayini okumnandi apula evamile
Tincture Schisandra. Indlela ukupheka nendlela ukusebenzisa
Isinongo elimnandi of plums: zokupheka